Abdiwahab Ahmed	 Jun 23, 2021
Sacuudiga oo qorsheynaya isbeddel lama filaan ah oo la…
Abdiwahab Ahmed	 Jun 22, 2021
Daawo: Xaguu marayaa dagaalka culus ee ka socda gobolka…
Newsroom	 Oct 7, 2020
Hogaamiyaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor ayaa kulan looga hadlayay qorshaha sugidda amniga la qaatay Wasiiradiisa, maadaama labo magaalo oo kamid ah maamulkaas lagu qabanayo doorashada kuraasta Golayaasha shacabka & Aqalka BFS. Qoor-Qoor ayaa u bandhigay Wasiiradiisa qorshaha sugidda amniga, martigelinta Ergo beeleedyada kuraasta Xildhibaannada dooraneysa, Musharixiinta iyo dhammaan waxyaabaha kale ee la xiriira Doorashada 20/21. Wasiirada qabanaya howlaha…
Wasiirka Arrimaha Gudaha & Dowladaha hoose ee DG Hir-Shabeelle Maxamed Cali Caadle oo la hadlay BBC-da ayaa ka hadlay khilaafka soo kala dhexgalay Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo Guddiga Dhismaha Baarlamaanka labaad ee maamulkaas. Khilaafka ayaa ka dhashay kadib markii guddigu uu soo saaray habraaca jadwalka xareynta Ergada, xulista Baarlamaanka, diyaarinta, dhaarinta ilaa fadhigooda ugu horeeyo waqtiga ay yeelanayaan. Wasiir Caadle ayaa sheegay in Guddigu uu qabyo…
Saraakiil katirsan Booliiska Kenya ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in weerarkii labaad oo lagu qaaday Gaari bas ah uu ka dhacay Gudaha Dalkaas gaar ahaan deegaannada dhulka Soomaalida ee Kenya maamusho. Dhacdadii ugu dambeysay waa weerar lagu qaaday bas mararay inta u dhaxeysa Ceelwaaq iyo Kotulo, kadib markii koox hubeysan oo loo maleynayo in ay katirsan yihiin A-Shabaab weerartay bas ka yimid Magaalada Nairobi. Inta la xaqiijiyay waxaa dhaawac soo gaaray 8-ruux oo qaarkood…
Ciidamada Miliatirga DFS ayaa howlgal miino baaris ah ka sameeyay wadada u dhaxeysa Balcad & Basra ee Gobolka Shabeelaha Dhexe, kadib markii gaari dad rayid ah ay la socdeen uu dulmaray miino ku qaraxday. Dadka deegaanka & saraakiil ciidan ayaa Axadle u sheegay in askarta Dowladda Federaalka ay xirtay qaar kamid ah waddooyinka duleedka ka ah Magaalada Balcad inta uu socday howlgalka miino baarista ah oo waxa ay joojiyeen isu socodka dadka iyo gaadiidka dadka beeraleyda…
NISA oo baaritaan la xiriira amaanka ku samaynaysa
Shaqaalaha xafiisyadda Dowladda Faderaalka Soomaaliya ayaa baaritaan la xiriira amaanka lagu samaynayaa sida ku cad bayaan ka soo baxay wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada Soomaaliya. Warqad ku taariikhaysan 03-October 2020, oo ay aragtay Axadle lana ogaysiiyay dhamaan Wasaaradaha dalka, Xafiis-yadda Hogaamiyaha iyo Ra’iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in baaritaan la xiriira amaanka laga samaynayo wasaaradaha si loo hubiyo shaqaalaha in ay xiriir la leeyihiin Al Shabaab…
Hogaamiyaha Dowlad-goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay Kal-Fadhiga Sadexaad ee Golaha Wakiilada maamulkaasi . Hogaamiyaha Dowlad-goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta furay Kal-Fadhiga Sadexaad ee Golaha Wakiilada maamulkaasi isagoo khudbadiisa furitaanka kaga hadlay arimaha doorashooyinka, amaanka iyo xaallada Gobolka. Axmed Madoobe ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in kahor Doorashada Xildhibaanada Federaalka ah xal laga gaaro…
Askari ka tirsan ciidanka Xoogga dalka oo ku dhagan qoriga laga rido gawaarida dushooda. Taliyaha Ciidamada xoogga dalka qeybta 143-aad Dhamme Axmed Xasan Siyaad ayaa waxa uu warbaahinta ciidamada ee SNA radio u sheegay iney dileen laba sargaal oo ka tirsanaa Al-shabaab, kadib howl-gal ciidamada ay ka sameeyeen deegaanno hoostaga Bariire oo ka tirsan Gobolka Shabeellaha hoose ee Koonfur galbeed Soomaaliya . Waxa uu tilmaamay inuu howl-galka yimid kadib xuuraan ay heleen oo ku…
Iran oo sheegtay in ay si aan kala sooc lahayn ugu aar-gudi
Iran ayaa ku eedeysay dowlada Mareykanka, dilkii General Qassem Soleimani,oo ay horay ugu eedayn jirtay dilkiisa madaxweynaha dalkaasi sida uu yiri afhayeenka wasaarada arimaha dibada ee Iran. Soleimani, oo ahaa ninka labaad ee ugu awooda badan Iran, ayaa isaga iyo sarkaal reer Ciraaq ah 3 Janaayo lagu dilay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Baghdad ka dib markii lala beegsaday duqeyn diyaaradeed oo Trump amray. Hogaamiyaha Mareykanka, oo aan ogeysiin aqalka Congress ee…
Gudiga Farsamada ee Soo Xulista Baarlamaanka 2aad ee Dowlad gobaleedka Hirshabeelle ayaa shaaciyay Jadwalka Doorashada Hirshabeelle. Guddiga ayaa sheegay in bishaan ilaa bilowga bisha oo socota ay kusoo dhameystiri doonaan howlaha soo xulista xildhibaanada 2 aad ee Dowlad-goboleedka Hirshabeelle. Guddiga soo farsamada soo xulista Barlamaanka Hirshabeelle ayaa looga fadhiyaa in ay soo dhisaan Barlamaanka 2 aad ee Hirshabeelle maadaamo ay soo dooranayaan Senetarada aqalka sare ee…